खेलकुद – Page 10 – Deshko News
Home » खेलकुद (page 10)
डिभिजन-२: नेपालद्वारा युएई चार विकेटले पराजित
आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन दुईमा नेपालले युएईलाई चार विकेटले पराजित गरेको छ । जितका लागि पाएको ११५ रनको लक्ष्य नेपालले २८ दशमलव पाँच ओभरमा ६ विकेट गुमाएर पूरा
काठमाडौँ, माघ २५ आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन –२ मा नेपालले नामिबियालाई पराजित गरेको छ । नामिबियाको विन्डहकस्थित एफिज पार्क मैदानमा भएको उद्घाटन खेलमा नेपालले उत्कृष्ट बलिङसहित नामिवियालाई ४ रनले पराजित गरेको हो । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नामिबियाले नेपाललाई जीतका लागि १३९ रनको लक्ष्य दिएको थियो । जवाफी ब्याटिङमा उत्रेको नेपालले ४९ दशमलव २ ओभरमा ९ विकेट गुमाएर ...
पोखरा, २० माघ पोखरा रङगशालामा जारी आहा–रारा गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिताको १६ औं संस्करणको उपाधि नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ । प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको फाइनल खेलमा थ्रीस्टार क्लबलाई १–० गोलको अन्तरले हराउँदै नेपाल पुलिस क्लबले उपाधि जित्न सफल भएको हो । सो प्रतियोगिताको निर्धारित समयमा दुबैतर्पmबाट कुनै पनि गोल हुन नसकेपछि अतिरिक्त थपिएको कुल २० मिनेटको पहिलो हाफको इञ्जुरी समयको दोस्रो ...
पोखरा, माघ १८ पोखरा रङ्गशालामा जारी आहा रारा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि नेपाल पुलिस क्लब र थ्रीस्टार क्लब भिड्ने भएका छन् । प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको अन्तिम सेमिफाइनलमा धरान फुटबल क्लब सुनसरीलाई १–० गोल अन्तरले हराउँदै पुलिस क्लब फाइनलमा प्रवेश गरेको हो । यसअघि बंगलादेशको उत्तर बरिन्धरा क्लबलाई ५–० ले हराउँदै थ्रीस्टार फाइनलमा पुगेको थियो । आजको खेलमा पुलिसका सुमन ...
आइपिएल खेल्न पाउने सन्दीप लामिछाने को हुन् ?
१७ बर्षकै उमेरमा इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) मा खेल्न पाउने भएपछि सन्दीप लामिछाने चर्चामा आएका छन् । लामिछानेलाई दिल्ली डेभिल्सले २० लाख भारतीय रुपैयाँमा किनेको छ
सन्दिप दिल्लीबाट आइपिएल खेल्ने, कति तोक्यो लामिछानेको मूल्य ?
नेपाली युवा क्रकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने इन्डियन प्रिमियर लिगमा आइपिएल खेल्ने पक्का भएको छन् ।
आइसिसी डिभिजनका लागि खड्काको कप्तानीमा नेपाली टोली घोषणा
अर्को महिना नामिबियामा शुरु हुने आइसिसी वल्र्ड क्रिकेट लिग डिभिजन दुईका लागि पारस खड्काको कप्तानीमा १४ सदस्यीय नेपाली राष्ट्रिय टोलीको घोषणा गरिएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाको आयोजनामा हुने प्रतियोगिता यही माघ १६ देखि २२ गतेसम्म चल्नेछ । नगरपालिकाले प्रतियोगिता सञ्चालन र व्यवस्थापनको
दोस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमियर लिग (डिपीएल) क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागी टोलीले आफ्नो टोलीको रणनीतिक खेलाडीको घोषणा गरेको छ ।
सान्चेज आर्सनल छोडी म्यान्चेस्टर युनाईटेडमा प्रवेश
काठमाडौ माघ ९ चिलीका फुटबल खेलाडी अलेक्सीस सान्चेज इङ्लिस प्रिमियर क्लब आर्सनल छोडी म्यान्चेस्टर युनाईटेड प्रबेश गरेका छन् । यसैगरी म्यान्चेस्टर यनाइटेडका अर्मेनियर मिडफिल्डर हेनरिक मख्तरीयन आर्सनल पुगेका छन् । सम्भवतः जनवरी ट्रान्सफर विन्डोको सबैभन्दा चर्चित ट्रान्सफरको रुपमा एङ्लिस फुटबलका दुई ठूला क्लबहरु आर्सनल र म्यान्चेस्टर युनाईटेडले खेलाडी सट्टापट्टा गरेका हुन् । दुवै क्लबले आफ्ना पूर्व खुलाडीलाई धन्यवाद दिँदै नयाँ ...